Xulalka kubadda cagta ee gobolada Karkaar iyo Nugaal oo galabta ciyaari doona fiinaalaha iyo xulka hanta koobka oo la dhowrayo maanta – Radio Daljir
Xulalka kubadda cagta ee gobolada Karkaar iyo Nugaal oo galabta ciyaari doona fiinaalaha iyo xulka hanta koobka oo la dhowrayo maanta
Garoowe,Feb 12 -Ciyaar lagu soo afmeerayo tartanka 6aad ee ciyaaraha gobolada Puntland ayaa galabta ka dhici doonta garoonka ciyaaraha ee Mire Awaare ee magaalada Garoowe.
Kulankan oo ay wada balansan yihiin xulalka kala matalaya gobolada Nugaal iyo Karkaar ayaa daawashadeeda waxaa ka soo qayb gali doona boqolaal qof oo ka kala imaanaya xaafadaha ay ka koobantahay caasimada,iyadoo taagerayaasha xulka Karkaar sidoo kale ay ka soo safrayaan deegaanada hoos taga gobolka karkaar.
Gobolada Karkaar iyo Nugaal oo aan waligood ku guulaysan ciyaraha gobolada Puntland ayaa mid walba wuxuu doonayaa inuu hanto tartankan, balse Nugaal ayaa mar soo gaartay ciyaarta kama danbaysta markaasoo ay koobkii qaaday kooxdii matalaysay xulka kubadda cagta ee Sool, balse waa markii ugu horaysay oo Karkaar ay soo gaadho ciyaaraha finalka.
Daawashada ciyaarta ayaa la filayaa inay ka soo qayb galaan madaxda Puntland oo uu ugu horeeyo madaxdweyne C/raxman Maxamed Faroolle,inkastoo ilaa hada dawlada aysan shaacin masuulka soo xiri doono Ciyaaraha,iyadoona horay cayaaraha uu xariga uga jaray madaxwayne kuxigeenka Puntland Gen.Cabdisamad Cali Shire.
Ciyaarahan oo si xiiso iyo xamaasad ay ku dheehantahay ku socda ayaa waxaa goboladoodii loo diray 6dii gobol ee kale ee ciyaraha ka qayb galay,kadib markii is reeb-reeb kadib ay ku guul daraysteen inay u soo baxaan Finalka.
Xulalka Nugaal iyo Karkaar ayaa mid walba waxaa uu rajo ka qabaa inuu tartanka ku guulaysto,iyadoo koox walba ay waddo wax kasta oo u suuro galinaya inay qaado horyaalka Puntland ee sanadka 2012,masuuliyinta Karkaar ayaa mudoyinkan magaalada ku sugnaa.
La arki doono Kooxda qaada ciyaaraha 6aad ee Gobolada kubadda cagta Puntland.
C/risaq Cali Silver